प्रधानमन्त्रीको सा’ला हितेन्द्रदेव शाक्यलाई वि’द्युत प्रा’धिकरणको नि’मित्त दिने त’यारी,ताली या गाली? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
प्रधानमन्त्रीको सा’ला हितेन्द्रदेव शाक्यलाई वि’द्युत प्रा’धिकरणको नि’मित्त दिने त’यारी,ताली या गाली?
काठमाण्डौं। स.रकारले कुलमान घिसिङको म्या,द थप गर्न अ,स्वीकार गरेको छ । नेपाल वि,द्युत प्रा!धिकरणको का,र्यकारी नि,र्देशक नि!यु.क्तिसम्व,न्धी का,र्यविधिअनु.सार घिसिङलाई म्या,द थ.प गर्न न.मिल्ने भन्दै उर्जा मन्त्रालयले घिसिङको म्या,द थ.प न.गरेको हो । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनका प्रेस स.ल्लाहकार द.यानि!धि भट्टले भने, ‘उहाँले म्या.द थप गर्न नियमले नै मिल्दैन्, कसरी गर्ने ?’ उनले आजसम्म घिसिङको समय बाँकी रहेकाले सोमबार प्रा,धिकरणका वरि.ष्ठ उप,कार्यकारी नि!र्देशकलाई नि,मित्त का,र्यकारी निर्देशकको जि,म्मेवारी दिने त.यारी भइरहेको बताए।
चार बर्षे कार्यका,ल आजबाट सकिएकाले घिसिङले सोमबारबाट अ,वका.श पा,उँदैछन् । उर्जा मन्त्रालयले प्रा,धिकरणका व.रिष्ठ का!र्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नि!मित्त का,र्यकारी प्रमुखको जि,म्मेवारी दिने त,यारी गरेको छ । आजसम्म घिसिङको म्या,द बाँ.की रहेकाले भो.लि नै नि,मित्त तो,किने भट्टले जानकारी दिए ।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उर्जासचिव दिनेश घिमिरेलगायतलाई बोलाएर घिसिङको नि!युक्तिस.म्वन्धीमा बिहीबार छलफल गरेका थिए । छलफलमा घिसिङलाई नि.रन्तरता दिन का,नुनी अ,डचन देखिएपछि रेग्मीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र ने,कपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई रि,पोटिङ गरेका थिए । सोही बै,ठकबाटै घिसिङले नि.रन्तरता सं,भावना नरहेको टुँ,गिएको जनाइएको छ । य,द्यपि का,नुनी अ,डचनलाई त!त्कालै मन्त्रिपरिषदले ह,टाएर भए पनि कुलमानलाई पु!नर्नियु.क्ति गर्न सकिने सं,भावना थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उर्जामन्त्री पुन नै स,कारात्मक नहुँदा घिसिङको म्या!द थप हुन नसकेको हो । यता नि,मित्त कार्यकारी निर्देशकको जि!म्मेवारी पाउन हितेन्द्रदेव शाक्यले प्रधानमन्त्री प!त्नी राधिका शाक्यमा,र्फत ल,बिङ गरिरहेका थिए ।
Previous योगेश भट्टराई सर’कारका प्रवक्ता तोकिने,तपाईं के भन्नुहुन्छ?
Next उज्यालोका हिरो कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएनन…हेर्नुहोस् ।